Hery Rajaonarimampianina : “Mitodika amin’ny vahoaka madinika ny fampandrosoana” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Mitodika amin’ny vahoaka madinika ny fampandrosoana”
Nametraka fanamby ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny lahateny nataony nandritra ny fitokanana ny Tobim-piantsoan’ny fiara mpitatitra sy taksiborosy eny Andohatapenaka.
Araka izany nanambara ny filohan’ny Repoblika fa efa manova fomba fijery ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao. “Mankany amin’ny fandrosoana isika amin’izao fotoana izao, ary izay no tokony ho fantatry ny vahoaka. Tsy mihemotra isika, tsy hanaiky ny hitondrana antsika miverin-dalana… fa tsy maintsy mandroso amin’ny fampandrosoana mitodika any amin’ny vahoaka madinika sy amin’ny vahoaka maro an’isa isika, ary amin’ny faritra rehetra manerana an’i Madagasikara no hanatanterahana izany”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Nambarany fa hanova ny lalan-tantara ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao, ary hanaporofo izany ny Filohan’ny Repoblika. Voalaza mantsy fa tsy hijanona hatreo amin’ny fanamboarana tobim-piantsoan’ny taksiborosy ny fampandrosoana, fa tsy maintsy manitatra hatrany ary hihamaro sy hihamafy, araka ny tenin’ny Filoha amin’ny hoe “Fotodrafitrasa fototra”, izay mipaka sy mifandraika amin’ny filàn’ny vahoaka.
Voalaza ihany koa fa hihazakazaka ny fandrosoan’i Madagasikara raha toa ka miaraka mifanolo-tanana ao anatin’ny fifampitokisana, ao anatin’ny fametrahana fitoniana sy ao anatin’ny fametrahana fomba fijery maharitra, sns, ny rehetra. “Tsy mena-mitahy amin’ireo firenena mitovitovy amintsika i Madagasikara aoriana kely ao raha toa ka mifanome tanana amin’ny fampandrosoana ny rehetra. Anisan’ny fanamby apetraky ny fitondram-panjakana anefa izany”, hoy ny Filoham-pirenena.
Notohizany izany fa vita, ary tsy sarotra fa hay tsara ny manova ny firenena ao anatin’ny fifanomezan-tanana, ka ny Filoham-pirenena no hitarika izany. “Vitantsika ao anatin’ny fotana fohy ny manatsara, manangana ary mampandroso sy manova ny firenena rehefa isika rehetra no mifanome tanana ho amin’izany”, hoy izy nanamafy.
Amboarina ny lalàna
Ankoatra izay, nampanantena ny mponina ny Filoham-pirenena fa mbola maro ny fotodrafitrasa sy asa tsy maintsy hotanterahina ho fampandrosoana an’i Madagasikara sy ny vahoaka maro an’isa sy ny vahoaka madinika. Anisan’izany ny fanamboaran-dalana maro isan-karazany mba ahafahan’ny mponina mifamezivezy malalaka.
Noho izany indrindra, nanambara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa amboarina tsy ho ela, ary ahazo fanitarana ireo tetezana amin’ny lalana mankeny Itaosy sy Ampitatafika. “Hanova an’Antananarivo isika saingy, tadidio fa tsy vita indray andro na ao anatin’ny herintaona akory ny fanarenana ity firenena, izay efa tafalatsaka anaty fahantrana nandritra ny 50 taona, ity. Mila fotoana isika amin’ny fanarenana, eny, fa na efa mihazakazaka ho amin’ny fampandrosoana aza. Ny fanambin’ny Filoham-pirenena dia ny fanatanterahana ny fampanantenana. Mila manohy isika ao anatin’ny fifampitokisana. Sahia mijoro, sahia manova, ary sahia manatsara… Natao izany mba ahafahan’ny vahoaka milamina am-pilaminana sy am-pitonian-tsaina.
Efa nambara teto ihany ny hoe « hafahafa ity tale jeneralin’ny Bianco ity, mihazakazaka manao valandresaka an-gazety sy manao fanambarana miampanga avy hatrany raha vao olona ao anaty fitondrana, na akaikin’ny mpitondra no misy mitoroka eny ...Tohiny